ဒီနေ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဆီ သွားရင်းနဲ့ Video ကြည့်လို့ရတဲ့ Site လေးသိလိုက်ရတယ်။ အဲဒီ Site ထဲမှာ Video တွေတော်တော်များပါတယ်။ ကြိုက်တာကတော့ TV Series တွေကို ပိုကြိုက်တယ်။ TV မှာ ပြနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလည်းပါတယ်။ အပျင်းပြေ ကြည့်လို့ရတာပေါ့။ အရင်တုန်းကတော့ anzv.tv မှာကြည့်တယ်။ သူက Register လုပ်ပြီး Winamp နဲ့ကြည့်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာက တရုတ်ကားတွေ ကိုရီးယားကားတွေ များတယ်။ အခု Site ကတော့ Register လုပ်စရာလည်း မလိုဘူး။ English Action/Drama တွေတော်တော်လည်းကောင်းတယ်။ သူငယ်ချင်းကတော့ လူတွေပြိုင်ကြည့်တော့ Connection နှေးတဲ့အခါကျရင် သူက Save လုပ်ထားချင်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော့ကို မေးတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲတဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သိသလောက် ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက် ဥာဏ်ဖြူတွေနဲ့ စမ်းပြီး လုပ်ကြည့်ပါသေးတယ် :P ဒါပေမဲ့ ဘယ့်နှယ့်မှကို မဘယ့်နှယ့်တာပါ။ မရတဲ့ အဆုံး လက်လျော့ထားလိုက်တယ်။ Movie တွေကြည့်ပြီး Download လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေ့ရင်လည်း ပြောပေးသွားပါဦး။ အားလည်းနာတယ် ခင်လည်း ခင်တယ် ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီ။ Movie တွေက FlashObject တွေများတယ်။ ကျွန်တော်တော့နည်းမျိုးစုံနဲ့ စမ်းတယ်ဗျာ။ မရဘူး။ Connection ကောင်းရင်တော့ ကြည့်ရတာအဆင်ပြေပါတယ် ( အဲဒါတော့ မင်းပြောမှလား ဖိုးချမ်းရာ)
ကျွန်တော်တော့ အခု Prison Break ကြည့်နေတယ်ဗျာ
Mayvelous 3:32 am
They use many diff files like googlevideo, youtube and server embedded files .wmv. For the embedded files, you can easily get it either by downloader FFextension or so. What I did was I just let it play till it finishes(off the voice) and get the cache files then change the extension to .flv.
Kinda messy but still work. Direct download is abit hard, so if u really wanna save then just get the cache files. But those TV series are not that worth saving anyways.
CMS 1:29 pm
thz:4sharing ur way. i used ff extension. but i couldn't dl it :) but i'll try ur way. thz:
a_lwan 6:01 am
i can't see movie from http://aznv.tv/en/. what player can i use to see it ?
s_potato 9:49 am
Post တောင်အသည်းအသန်ကြိုးစားပြီးစိတ်ရှည်လက်ရှည်တင်နေရတာ..Videoကြည့်ရင်တော့ New Year ကို Cyber Cafe မှာကြိုရမယ်ထင်တယ်နော်.....AnyWay Thank U for ur Post..........
CMS 6:14 pm
a_lwan > winamp player ကို သုံးပြီး ကြည့်ကြည့်ပါ အဆင်ပြေပါတယ် (Connection ကောင်းရင်ပေါ့)
s_potato > connection ကို အဲဒီလောက် မချီးကျူးပါနဲ့ဗျာ :P
p 5:42 pm
pls test "videoget" software. it is easily convert flv to many kind of extension such as wmv.avi.etc....
CMS 6:39 pm
thz: for ur help :)